မင်းကင်းမြို့ သီတဂူမင်းကျောင်း စက္ခုဒါနဆေးရုံဖွင့်ပွဲ သီတဂူဆရာတော်ကြီး တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်? - Yangon Media Group
မင်းကင်းမြို့ သီတဂူမင်းကျောင်း စက္ခုဒါနဆေးရုံဖွင့်ပွဲ သီတဂူဆရာတော်ကြီး တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်?
မင်းကင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅
သီတဂူ မင်းကျောင်းစက္ခုဒါနဆေးရုံတော် ဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် မဟာမင်းကျောင်းတိုက်ဝင်း၌ ဖွင့် လှစ်မည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါဖွင့်ပွဲသို့ သီတဂူဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး မျက်စိရောဂါဝေဒနာရှင်များကို လည်း ယင်းနေ့တွင် အခမဲ့စမ်း သပ်စစ်ဆေးခွဲစိတ်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဆေးရုံကို စစ်ကိုင်း တောင်ရိုးသီတဂူဆရာတော်ဒေါက် တာအရှင်ဉာဏိဿရ၏ ဦးဆောင် မှုဖြင့် မင်းကင်းမြို့မဟာမင်း ကျောင်းဆရာတော် ဦးဇဝနအား အမှူးထား၍ ရပ်ဝေးရပ်နီးဆေးရုံ တော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက အလှူရှင်များ လှူဒါန်းငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ သီတဂူဆရာတော်ကြီးမှ ရေစက် သွန်းချမည်ဖြစ်သည်။
”ဆေးရုံတော်ဖွင့်ပွဲနေ့မှာ အ ခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးရေးအစီအစဉ် အတွက် မျက်စိအထူးကုဆရာဝန် ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးမြ အောင်နဲ့သီတဂူအာယုဒါနဆေး ရုံတော်ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ က ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်မှာ လူနာ တွေကြည့်ပါမယ်။ ၂၄ ရက်စပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးကုသပါမယ်။ ဒီ ဇင်ဘာ ၂၈ ရက်မှာ မျက်စိကုသ ရေးအလင်းအောင်ပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ် ပါတယ်။ အခုဆိုရင် မျက်စိကုဝေ ဒနာရှင်များအတွက် အလှူရှင်များ မှ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသစရိတ် တစ်ဦး စာကျပ်သုံးသောင်းစီ လှူဒါန်းထား တာတွေရှိနေပါပြီ”ဟု မင်းကင်းမြို့မှ ဒေါက်တာသိန်းဇော်က ပြောသည်။
မင်းကင်းသီတဂူမင်းကျောင်း စက္ခုဒါနဆေးရုံတော်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် သီတဂူဆရာတော် ကြီးမှ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားဟောကြားမည်ဖြစ်ပြီး စက္ခု ဒါနဆေးရုံဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်၍ ဒေသ တွင်းရှိ မျက်စိဝေဒနာရှင်များ
အလွယ်တကူ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကု သမှုခံယူနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ချစ်သူများတွေ့ဆုံပွဲကို တာချီလိတ်၌ ကျင်းပ
သင်္ကြန်ကာလ ကျုံးပတ်လည်သန့်ရှင်းရေး အမှိုက်သိမ်းယာဉ်နှင့် လုပ်သားအင်အား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မ?